15/04/2011 : tsy manaiky kobaka am-bava ny SECES
Na dia efa nilaza aza ny minisitry ny fampianarana ambony vaovao ao amin’ny FATE fa hivaha tsy hoela ny olana eny amin’ny anjerimanontolo dia toa mifanalavitra amin’izany ny zava-misy marina. Ny fivorian’ny SECES taorin’ny fihaonan’ny solotenany tamin’io minisitra io dia nanambara fa tsy hanomboka ny taom-pianarana raha tsy tanteraka avoko ny fitakian’izy ireo . Isan’izany ny fandoavan’ny FATE ireo tambim-pikarohana mbola tsy azon’ny mpampianatra. Eo koa ny fampidirana ny voarakitra ao amin’ireo didy hitsivolana telo nampanantenana ny tombontsoan’ny mpampinatra ao anaty teti-bolam-panjakana 2012.
Mbola takian’izy ireo ihany koa ny fisian’ny vatsim-pianarana sy ny karaman’ny mpandraharaha ary ny enti-mampiodina ny anjerimanontolo manerana ny Nosy vonona azo ampiasaina avy hatrany. Tokony afaka anefana telo volana misesy avy hatrany aloha ireo eo am-pelatanana vao hanomboka ny taom-pianarana ny SECES. Tsara ny manamarika fa efa tara roa volana izao ny fidiran’ny mpianatra eny amin’ny anjerimanontolo noho ny tsy fahaiza-mitantana ataon’ny FATE.
Resolutions_CN_11-12_avril.pdf 1.64 Mo
13/04/11 : SVND : ny Firenena mitoetra no fanoitra (+vidéo)
Ny mpitondra rehetra dia mandalo ihany fa ny vahoaka sy ny Firenena no mitoetra sy maha-izy azy an’I Madagasikara. Fitsinjovana izany indrindra no antom-pisianan’ny “Solidarité aux Victimes du Non-Droit” izay miady amin’ny fampanjakana ny rariny sy ny fahamarinana eto amin’ny tanindrazana. Hijoro ara-panjakana ho fikambanana izy io atsy ho atsy raha ny voalazan’I Lalatiana Ravololomanana mba hazahoana fahombiazana kokoa amin’ny ady ataon’izy ireo iahiany ireo izay iaharan’ny tsy rariny rehetra.
Raha ny tarehi-marika eo am-pelatanan’ireo mpandrindra dia misy 135 ireo gadra politika mbola any am-ponja hatreto. Ezaka hataon’ity fikambanana ity ny famoahana azy ireo na farafaharatsiny fanafainganana ny fitsarana mba ahafantarana marina izay heloka vitany sy ny sazy mety miandry azy. Ao anatin’izay dingana izay dia nisy ny famoriana ireo fianakavian’ny voafonja politika androany mba hanangonana ny mombamomba azy ireo tsirairay ahafahana mandrafitra ny antotan-taratasy hiadiana hoazy eo amin’ny sehatra iraism-pirenena. Ankoatr’izay dia mametraka tsikelikely ny rantsana any amin’ny faritra izy ireo ka raha vao vita ny fikarakarana ny sata hifehy ny fikambanana dia afaka hiasa avy hatrany ireo any amin’ny Faritra ireo. Mandra- pahatongan’izay aloha dia nitondra fanampiana hoan’ireo fianakaviana manana havana any am-ponja ny SVND ka vary 5 Kg sy savony ary akora fanadiovan-drano isaky ny voafonja no natolotra azy ireo mba sitrany ahay ahafahana mamatsy ireo gadra politika ireo. Ny vola azo tamin’ny sakafom-piraisan-kina nataon’izy ireo tamin’ny 27 Martsa lasa teo,araky ny fanazavana, no nenti-manana manontolo izao fanampiana izao mandra-piandry izay mety ho fanampiana any aoriana.
“Tsy tsangan’olona no vahaolana amin’ny krizy eto Madagsikara ary izay no tsy mampety ny famadihana palitao” hoy Lalatiana Ravololomanana. Amin’ity Komity ity dia tsy mitsahatra ny asa raha tsy foana ny fanitsahana ny zon’olombelona sy ny fanaovana zinona ny mpiara-belona. Misy arak’izany ireo asa atrehin’izy ireo fohy ezaka saingy ny tena mavesatra dia ny fiatrehana ny hoavy lavitr’ezaka hanafongorana ny tsy rariny eto Madagasikara.
12/04/2011 : Mbola hozaka ihany ve? (+vidéo)
Vaovao farany amin’ny ora anoratana dia hiakatra 50 AR ny vidin’ny solika eny amin’ny mpaninjara manomboka rahampitso. Izay no vokatry ny fihaonan’ny ministry ny angovo FATE sy ny mpaninjara ary ireo mpandraharaha amin’ny solika. Araky ny nambaran’ny Filohan’ny GPGLSS dia nifanaraka izy ireo fa hamoaka didy hitsivolana ny minsteran’ny FATE mandidy ny tsy hikitihana ny tombontsoan’ny mpitantanana tobin-tsolika. Fanapahan-kevitry ny biraon’ny vondron’ny mpaninjara solika arak’izany ny hampiato ny fitokonana saika hataon’izy ireo rahampitso ary hivarotra avokoa izy ireo. Tsy mbola fantatra aloha hatreto raha ny mpikambana rahetra no miombon-kevitra na ireto birao ireto indray no nahazo tombontsoa manokana ka sahy manapaka avy hatrany ny fampiatoana ny fitokonana.
Ny vahoaka no mizaka
Ny tena olana amin’ny toe-javatra toy izao dia any amin’ny vahoaka mampiasa ny solika no tena iharan’ny tsindry hazolena. Raha milamina ny an’ny mpandraharaha sy ny FATE dia tsy maintsy zakain’ny vahoaka kosa ilay 50Ar fiakaran’ny vidin-tsolika. Mazava hoazy fa hampiakatra ny vidin’entany ihany koa ireo mpivarotra satria hiakatra hoazy ny saran-dalana itanterana izany entana izany. Ny fitanteram-bahoaka ihany koa dia mety hijery ny momba azy satria azo atao hoe efa mavesatra aminy izany fiakarana izany ka raha sanatria mampiakatra ny saran-dalana koa izy ireo dia ny vahoaka hatrany no iharan’ny tsy eran’ny ainy.
Ny fanafodiny dia ny fahasahiana mijoro mitaky ny fiverenana amin’ny ara-dalàna hatrany. Ny fanjakana ara-dalàna dia afaka mametraka ady hevitra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena amin’ny resaka vidin-tsolika. Fa raha fahefana “sans qualité” tsy afaka hifampiresaka amin’izao tonotolo izao mikasika izany.
12/04/2011 : Vidin-tsolika : tsy hivarotra ny mpaninjara rahampitso
Tsy hisy mpaninjara solika hivarotra eto Antananarivo rahampitso Alarobia 13 Aprily 2011 manomboka amin'ny 05 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Izany dia vokatry ny tsy fanaken’izy ireo ny famerana ny vidin-tsolika ataon’ny FATE. Ny minisitry ny angovo ao amin’ny FATE manko dia sahy nilaza fa tsy hisy mmpivarotra hitokona izany satria efa nifampiresahana ny momba ny vidin-tsolika eto Madagasikara.
Ny vondron’ny mpaninjara kosa dia nilaza fa tsy afaka hiditra fatiantoka intsony izy ireo satria efa tena am-bivitra ny fandeferana azo atao momba ity solika ity. Araky ny nambaran’ny Filoohan’ny GPGLSS dia efa nanolo-kevitra ny hanenana ny hetra momba ny fivarotana solika izy ireo saingy nolavin’ny FATE izany. Mbola hetsika fanairana ihany io andro tsy misy solika io raha ny vaovao voaray fa manome fe-potoana hatramin’ny 15 Aprily hoan’ny ministera sy ny vondron’ny mpandraharaha amin’ny solika ny mpaninjara mba hahitana vahaolana. Aorian’izay dia efa manana ny fiadiana hoentiny miatrika ny olana ireto mpaninjara solika ireto araky ny nambaran’ny Filohan’ny GPGLSS.
Toa mikorontana avokoa izay alehan’ny FATE amin’izao fotoana izao. Ny eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena dia nandamoka vokany miezaka mafy ny renimalala mampiasa ireo iraka isan-karazany hijabaka amin’izany fanelanenana izany. Ilay governemanta noheverena fa hamaha olana toa itangoronan’ny rihatra amin’izao fotoana izao. Vao andro vitsy monja nijoroany dia efa sendra ireo olona am-polony namoy ny ainy noho ny fihinanana trondron-dranomasina tany Toliara. Nitohy tamin’ny resaka “bois de rose” tany Taolagnaro. Ny tsy fandriam-pahalemana moa tsy lazaina intsony. Ireo mpitsabo any Toamasina dia mitaky ny hitam-basy noho ny famonoana feno habibiana natao tamin’ny mpiara-miasa tamin’izy ireo. Ary izao tsy takona intsony ny nafenina fa dia hitokona ny mpaninjara solika ary manome “ultimatum” hatramin’ny zoma izao. Asa na mbola hiziriziry amin’ny fitantanan’olon-tokana ihany ny FATE satria mihevitra fa ny fahanginan’ny vahoaka dia midika fahalemena.
20/03/2011 : AS ADEMA notronin’ny Filoha RAVALOMANANA : hahazo NOTAM indray koa ve ?
Niatrika lalao baolina kitra lehibe tany Afrika Atsimo androany ny ekipan’ny ADEMA. Amin’ny maha-filoham-pirenena lanim-bahoaka azy dia nanotrona ireto mahery fo Malagasy ireto ny Filoha RAVALOMANANA Marc. Marihina fa efa mpankafy baolina kitra hatraizay ny Filoham-pirenana ary mijoro hatrany amin’ny maha-raiamandreny azy ny tenany rehefa misy ny tanora miaro ny voninahitry ny Tanindrazana iombonana.
Sarin'ny Filoha RAVALOMANANA nanotrona ny AS ADEMA
Hanao ahoana ny tohiny
Mialoha ny niaingan’izy ireo teto an-tanindrazana dia nihaona tamin’ny Praiminisitra FATE ireto tanora Malagasy ireto. Ny Filoham-pirenena kosa vantany vao nahare fa hoany Afrika Atsimo ny AS ADEMA dia nataony tao anaty fandaharam-potoanany avy hatrany ny fanotronana ireto tanora ireto eny an-kianja. Miandry ny tohiny ny mpanara-baovao rehetra sady manontany tena amin’ny mety hasosoran’ny FATE noho ireto sary maro niarahan’ny ADEMA sy ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA : hamoahana NOTAM indray ve ny AS ADEMA ka tsy havela hiverina an-tanindrazana? “Eo tsika mahita izy” hoy ny fitenin’ny tanora ankehitriny.
08/03/2011: MESSAGE DE MADAME LALAO RAVALOMANANA JOURNEE MONDIALE DE LA FEMME
Nous vivons des moments difficiles, face à de nombreux défis. En tant que femmes en Afrique, nos hommes portent le poids de notre avenir sur leurs épaules...
...Des centaines de milliers de femmes et d’enfants, dans notre Île bien aimée, à Madagascar, font face maintenant à d’énormes défis. Beaucoup ne peuvent pas se nourrir ou nourrir leurs familles. Beaucoup plus ne peuvent s’instruire ou envoyer leurs enfants à l’école.
Message_Premiere_Dame.pdf 36.6 Ko
First_Lady_Address_08_03_11_ENG.pdf 42.45 Ko
hafatra_Lalao_Ravalomanana.pdf 42.73 Ko
04/03/2011 : FATE : tsy mahay lalàna ka sahy manala baraka mpikirakira lalàna (+vidéos)
Naelin’ny HAT manerana ireo gazety mpiseho isan’andro androany ny fanambarana milaza fa « mpandainga ny Filohan’ny Holafitry ny Mpisolovava ». Mahakasika indrindra ny raharaha « Radion’ny Gasy » moa ity resaka ity. Fantatra mantsy fa misy mpisolo vava iray notazomin'ny DST avy hatrany ny 28 Febroary lasa teo raha nanatrika ny famontorana natao tamin’ny olona arovany momba ity raharaha ity. Taorian’izay dia nanambara ny Batônier Radoson Solo fa tokony nampandrenesina mialoha ny tenany satria izay no paipaika fanao mialoha ny fitazomana na fisamborana mpisolovava.
Nanambara anefa ny avy ao amin’ny DST sy fiadiidan’ny filohan’ny HAT fa efa nampilazaina ity Filohan’ny Holafitra ity ka izay no maha-mpandainga azy. Notsipahin’ny Bâtonier Radoson Solo izany ary nambarany fa « zary manafitohina mihitsy ny fanitsahana lalàna eto amintsika amin’izao fotoana izao”. Araky ny fanazavan’ny Filohan’ny Holafitry ny Mpisolovava dia na antso an-telefonina aza tsy natao taminy hampandrenesana ny fitazomana ny mpiara-miasa amin’izy ireo. « Asaivo mamoaka porofo ry zareo raha manana taratasy nampilazana ny Holafitra » hoy ny Batônier. « Fanalam-baraka tanteraka izao » hoy izy « koa takiko ny fanintsiana haingana io vaovao io satria misy lalàna mazava tsara mikasika ny fanalam-baraka an-gazety eto amitsika ».
Voalaza fa hivory maika ny filan-kevitry nny Holafitry ny Mpisolovava handinika momba ity raharaha ity ary handinika ny mety hotohiny. Nanambara anefa ny Batônier fa « heverina ho toy ny mahafantatra lalàna avokoa ny olon-drehetra ka mahagaga raha ireo milaza fa manam-pahefana indray no minia mikipy manoloana izany ary tonga amin’ny fanalam-baraka an-gazety toy izao ». Fantatra moa fa efa nandefa taratasy (lettre de constitution) tany amin'ny tokony handefasana izany ny Holafitry ny Mpisolovava mampilaza fa mijoro miaro ny Me. Stephenson Ranarivony ny "Ordre de Avocats".
Rindrim-be tokoa no nitsena ny DST sy ny HAT amin’ity raharaha ity satria zatra lalan-dririnina izy ireo ka tany amin’ny mpikirakira lalàna no nanao hitsin-dalana. Manontany tena ihany ny mpanara-baovao hoe mbola misy « cabinet juridique » ve ao Ambohitsorohitra sa samy manao izay saim-pantany ka lasa didin’ny bebasy ny fitantanana ny firenena ?
VAOVAO FARANY AMIN'NY RAHARAHA "RADION'NY GASY" :
Fantara izao fa tanana am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy daholo ny ny dimy lahy tamin'ireo voroiroy amin'ny resaka "Radion'ny Gasy" nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny lehilahy iray ary Ramatoakely Tantely dia nalefa any amin'ny fonjan'ny Manjakandriana.Ilay mpisolovava moa tsy mbola niakatra fampanoavana satria mbola miandry "régularisation de poursuite".
Mbola maro kosa ireo solombavam-bahoaka sy ireo olon-tsotra karohina noho ity raharaha ity araka ny loharanom-baovao ihany.
25/02/2011 : Tomponandraikitra amin’izay mitranga rahampitso ny HAT hoy ny F3M (+vidéo)
Araky ny vaovao nampitain’ireo mpandrindra ao amin’ny fiaraha-mientan’ny mpiasampanjakana dia tsy mbola azo ny fazahoan-dalana avy amin’ny rafitra isan-karazany mahakasika ny hetsika kasain’izy ireo hatao eo amin’ny kianjan’ny demokrasia Ambohijatovo. Mampahafantatra ny rehetra anefa izy ireo fa mahalala tsara ny momba ny lalana mifehy ny fotodrafitrasan’ny tanàna satria mpiasam-bahoaka. Ny fanehoan-kevitra kasaina hatao rahateo,araky ny fanazavana ihany, tsy misy ambadika politika fa fitakiana sindikaly.
Iharan’ny fampihorohoroana tanteraka ireo mpandrindra ireo raha ny voalazan’izy ireo. Ny vadin’ny iray tamin’izy ireo dia nahazo famindran-toerana maika any Antsiranana na dia tsy araky ny lalàna aza izany. Araky ny filazan’ireo mpandrindra ihany koa dia maro ny didy fampisamborana efa nivoaka momba ireto mpandrindra ny F3M ireto.
18/02/2011: F3M : mampahantra ny 10% omen’ny FATE (+vidéo)
Mikasa ny hanatanteraka fanehoan-kevitra ao amin’ny Kianjan’ny Demokrasia Ambohijatovo ny Fiaraha-mientan’ny Mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Izany dia mba hisian’ny fifanakalozana eo amin’ny samy mpasam-bahoaka manodidina ny fitakian’izy ireo ary ampahafantarana ny tsy mandadiharona ny olan’ny F3M. Nametraka fangatahana ara-dalàna tao amin’ny fiadidiana ny Kaomin’Antananarivo renivohitra izy ireo satria olon’ny asam-panjakana ka mahafantatra ny pitsony rehetra momba izany fazahoan-dalana hanao hetsika famoriam-bahoaka izany. Nangataka ny datin’ny 26 Febroary ny F3M ka nanambara mazava fa “raha tsy hanome ny CUA dia azy ny azy fa izahay mahalala ny paipaika mikasika ny fitantanan-draharaha ary ao anatin’izany ny fanomezana toerana hanaovana hetsika fifampizarana vaovao sy fanehoan-kevitra.
12/02/2011 : Hikolo ny taranaka Malagasy ny « Hetsika Fanasina » (+vidéo)
12 Febroary 2010 – 12 Febroary 2011 feno herintaona androany ny hetsika voalohany namelabelarana ny “fanasina” tokony hapetraka noho ny ota sy fady nataon’I TGV sy ny namany. Manomboka androany ary dia tapakevitra ireo mpandrindra fa hampetraka haharitra eto amin’ny tany sy ny firenena ny “hetsika fanasina”. Mba tsy hofomba fanao eto amintsika ny “ota sy fady”. Hikolo ny foto-pisainan’ny taranaka Malagasy rehetra ny hetsika mba tena hitombona tanteraka ny fahafantarana ny mety sy ny tsy mety. Nanolotra volavolam-panehoan-kevitra (projet de manifeste) voalohany izy ireo androany ary nampanantena fa tsy hoela dia hovoarafitra ny sata sy ny fifampifehezana anaty mba hampijoro tsara ny fikambanana. Tsy ho fikambanana fe fikambanana fotsiny anefa, hoy ny mpandrindra, fa hanangana fanabeazana mba tsy hiverenan’ny fanonganam-panjakana intsony eto amin’ny tanindrazana iombonana.
Sary "Hetsika Fanasina"
FANASINA_120211.pdf 373.02 Ko